Waa maxay Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC)
Glycine Propionyl-L-Kaarnitine waxaa loola jeedaa nooca molecularly bonded ee propionyl-L-carnitine iyo glycine amino acid. Waxaa loo kala qaadaa qoyska si la mid ah 'Carnitine' waana mid aasaasi u ah aasaaska Creatine. Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) wuxuu u shaqeeyaa sida antioxidant, waxayna keenaysaa dagaal saameyn leh oo ka dhan ah xagjirnimada xorta ah iyo sidoo kale ka ilaalinta lipid peroxidation-ka.
Intaa waxaa sii dheer, waxay gacan ka geysaneysaa sameynta tamarta iyadoo awood u siinaysa in asiidh dufanka silsiladda dhaadheer u gudbiya mitochondria. Waxay ka caawisaa ka takhalusida walxaha qashinka - kaararka carnitine ee ka ilaalinta jidhka jirrada wadnaha iyo sonkorowga. GPLC waxaa loo tixgeliyaa inay leedahay shaqo dhiirrigelinaysa koritaanka murqaha waxayna kordhisaa jimicsiga waxqabadka. Kaabista ayaa sidoo kale lala qaadan karaa waxyaabo kale oo dheeri ah, tusaale ahaan, propionyl-l-carnitine l-arginine iyo niacin, oo ka caawisa hagaajinta cillad aan caadi ahayn (ED) ee ragga. Si kastaba ha noqotee, ka hel qiyaasta saxda ah dhakhtarkaaga si aad uga fogaato xad-dhaafka, taas oo keeni karta waxyeelo daran.
Noocyada Propionyl-l-carnitine waxaa ka mid ah; 3-propanoyloxy-4- (trimethylazaniumyl) butanoate, Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9), L-carnitine propionyl, PLC, LPC, iyo Glycine propionyl-L-Carnitine Hydrochloride. The dheeraadka cuntada waxaa lagu iibiyaa magacyo kala duwan oo nooc ganacsi ah iyadoo kuxiran meesha aad joogto. Si kastaba ha noqotee, taasi waa inaysan noqon wax ku dhibto; dawooyinku waxay awood u yeelan doonaan inay ku hanuunin karaan iibsashada.
Dheeraadkan waxaa laga heli karaa dukaamada internetka ee kaladuwan halkaas oo aad sidoo kale ka soo dhoofsan karto dhibaato la'aan. Tusaale ahaan, propionyl-l-carnitine Walmart waxay ku bixisaa waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Dhib malahan meesha aad joogto, isticmaal taleefankaaga casriga ah ama kombiyuutarka oo samee amarka propionyl-l-carnitine Walmart maanta. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku sameyso cilmi baaristaada iibiyaasha glycine propionyl ka hor intaadan gaarin go'aankaaga ugu dambeeya. Akhriso dib u eegista 'propionyl-l-carnitine Reddit' si aad u hesho aragti guud oo ku saabsan sida iibiyeyaashu ama kaabistu u shaqeeyaan. Macaamiisha had iyo jeer waxay muujiyaan ra'yigooda daacadnimo ee ku saabsan dheeraadka, taas oo kaa caawin karta xulashada iibiyaha ugu fiican. Dhakhtarkaagu wuxuu kaloo noqon doonaa qofka ugu fiican ee kugu hagi kara meesha iyo sida looga helo kaabis tayo leh oo kaa caawin doonta inaad gaarto yoolalkaaga.
Glycine Propionyl-L-Carnitine iyo L-Carnitine
GPCL waxaa loo yaqaan 'Carnitine's propionyl ester' oo ka kooban qayb kale oo ka mid ah glycine. Sababtoo ah unugyada esterase ee enzymes, Glycine Propionyl-L-Carnitine testosterone waxay u baahan tahay inay ka ciyaarto doorka wax soo saar oo ay keento glycine, Carnitine, iyo sidoo kale acid propionic ee jirka bini'aadamka. Glycine Propionyl-L-Carnitine iyo L-Carnitine waxay ku kala duwan yihiin cabbir gaar ah. Labaduba waxay gacan ka geystaan ​​soo saarista tamarta iyo sidoo kale koritaanka murqaha. Baadhitaanka 'Glycine propionyl-L-carnitine' ayaa sidoo kale jidhkaaga ka caawiya inuu ka bogsado cudurrada ay ka mid yihiin cudurrada wadnaha.
Taas bedelkeeda, L-Carnitine waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta xanuunka lugta iyo sidoo kale cudurada wadnaha. L-Carnitine waa kiimiko halka baarista Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9) ay tahay mid molikali ah. Marka la soo koobo, Glycine Propionyl-L-Carnitine testosterone waxay la dagaallameysaa cudurka halka L-Carnitine ay bogsato cudurada.
Saamaynta Glycine Propionyl-L-Carnitine
Kuwa soo socda ayaa ah glycine propionyl L faa'iidooyinka carnitine:
Bixinta Tamarta. Propionyl-L-carnitine wuxuu ka caawiyaa jirka inuu soo saaro tamar. Waxay muhiim u tahay shaqada wadnaha ee habboon, dhaqdhaqaaqa muruqyada, iyo howlaha kale ee jirka. Sidoo kale waxay mas'uul ka tahay wareegga dhiigga ee sare ee jirka.
Daweynta heerarka testosterone ee hooseeya. Gabowga ayaa sababi kara testosterone hooseeya ragga. Propionyl-L-carnitine oo lagu daweeyey acetyl-L-carnitine muddo lix bilood ah ayaa dawayn hooseysa waxqabadka jinsiga, niyad jab, iyo daal xagga raga ah. Isku-darkaani wuxuu u shaqeeyaa sida testosterone synthetic.
Angina ama feedho xanuun. Qaadista propionyl-L-carnitine afka ayaa ka caawisa dadka qaba angina socodka fog. Dadka qaarkiis, waxay yarayn kartaa inta jeer ee xanuun feeraha ah.
Waxay daaweyneysaa cudurka wadnaha ee ischemic. Markaad ku muddid xididdada halbawlayaasha ee loo yaqaan 'propionyl-L-carnitine' xididka, waxay caawineysaa inay wadnaha istaagto si ka wanaagsan dadka ku jira cudurka wadnaha.
Wadne qabad xanuun badan (CHF). Propionyl-L-carnitine waa daaweyn firfircoon oo loogu talagalay dadka qaba CHF dhexdhexaad ama khafiif ah. Waxay wanaajisaa sida qalbigoodu u shaqeeyo una caawiyaa iyaga inay u lugeeyaan masaafooyin dhaadheer.
Glycine propionyl l carnitine iyo erectile dysfunction. Kordhinta hormoonnada testosterone ee jirkaaga, kabitaankan ayaa si toos ah u xallinaya dhibaatooyinka kacsiga iyo sidoo kale kordhinta waditaanka galmada ee ragga.
Propionyl-L-carnitine ayaa inta badan lagu daraa Viagra (sildenafil) si loogu helo natiijooyin fiican ragga qaba ED iyo sonkorowga. Intaa waxaa sii dheer, maaddooyinka gaarka ah ee ka kooban propionyl-L-carnitine waxay u badan tahay inay kor u qaadaan waxqabadka galmada.
Cudurrada xididdada wadnaha ee wadnaha (wareega wareega). Cudurada wadnaha waxay sababi karaan barar xididdada ama xanuun lugta ah inta aad lugeyneyso; xaalad loo yaqaan kala-goys ku-meel-gaadh ah. Irbado cirbad ah ama duritaan toos ah ee Propionyl-L-carnitine waxay ka caawisaa dadka ay la kulmaan xanuun lugta inay masaafooyin dhaadheer socdaan.
Cudurka Peyronie (wuxuu adkeyaa unugyada guska)Daawada loo yaqaan 'verapamil', oo ay weheliso propionyl-L-carnitine waxay kordhisaa waxqabadka galmada, waxay ka hortagtaa sii xumeynta xaalada. Isku darka waxaa loo qaadan karaa afka ama irbadaha. Cudurka Peyronie wuxuu u baahan karaa qalliin haddii uusan ku jirin. Sidaa awgeed, Propionyl-L-Carnitine ayaa u soo gurmada.
Cudurka mindhicirka (ulcerative colitis). Propionyl-L-carnitine wuxuu waxtar u leeyahay yareynta astaamaha bukaannada qaba ulcerative colitis kuwaas oo sidoo kale ku jira daawooyinka qaarkood. Waxay baabiin kartaa astaamaha.
Glycine Propionyl-L-Carnitine Cilmi baaris iyo Natiijo
Cudurka Crohn (cudurka mindhicirka)Cilmi baaris hordhac ah ayaa muujineysa in isticmaalka propionyl-L-carnitine uu si aad ah u yareynayo astaamaha bukaanada qaba cudurka Crohn.
Cudurka dufanka daba-dheeraaday (CFS).Daraasadaha ayaa soo jeedinaya in propionyl-L-carnitine ay hagaajin karto daalka guud ee bukaanka CFS. Waxa xiiso leh, haddii acetyl-L-carnitine lagu qaso propionyl-L-carnitine, natiijadu way ka yara fiicnaaneysaa adeegsiga labada dheeri.
Awooda jimicsiga. Qodista waxay kordhin doontaa awooda baaskiil wadida, awooda adkeysiga jimicsiga jirka ee culus. Si kastaba ha noqotee, sida ugu habboon u qaado qiyaasta glycine propionyl-l-carnitine. Ka badinta xad-dhaafkan waxay ku dambayn kartaa waxyeelada glycine propionyl-l-carnitine HCl, oo laga yaabo inay kharash badan ku badasho.
Waa maxay cunnooyinka qaniga ku ah Glycine Propionyl-L-Carnitine?
Glycine propionyl-l-carnitine waxaa badanaa laga helaa:
Cayayaanka caleenta madow
Digaag digaag ah
Sida loo qaato Glycine Propionyl-L-Carnitine
Propionyl-L-Carnitine waxaa loo iibiyaa kaabis. Waxaad ka heli kartaa dukaanka deegaankaaga ama farmasigaaga. Ciyaaraha fudud ayaa si weyn uga faa'iideysan kara qaadashada maadaama ay jirka ka caawineyso inuu sii wado shaqada muruqyada oo uu fiicnaado socodka tamarta xuubka unugyada. Waa kuwan kuwa lagu taliyey Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9) qaddarka qaadashada ee lagu taageeray cilmi baarista.
Si loo daaweeyo dhibaatooyinka xididada dhiiga: Qaado 500-2000 mg propionyl-L-carnitine laba jeer maalintii.
Si loo daaweeyo CHF (wadne qabatinka wadnaha), angina ama xanuun laabta ah; Qaado 500 mg propionyl-L-carnitine saddex jeer maalintii.
Si kor loogu qaado testosterone ee ragga da'da ah: Qaado laba garaam oo ah propionyl-L-carnitine iyo laba garaam oo acetyl-L-carnitine maalin kasta.
Glycine propionyl l carnitine iyo cillad la'aanta erectile: Qaado 2 garaam oo ah propionyl-L-carnitine maalin kasta oo lagu qasmo 50 mg oo ah waxaa la siiyaa laba jeer usbuucii. Isku darka gaarka ah ee propionyl-L-carnitine l-arginine iyo niacin ayaa sidoo kale kor u qaadi doona waditaanka galmada. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta waa inay noqotaa 250mg fir propionyl-L-carnitine iyo 20mg oo loogu talagalay niacin. Dhanka kale, waxaad sidoo kale ku qaadan kartaa kabitaanka adoo adeegsanaya arginine 2500 mg maalintii.
Cudurka Peyronie: 2 garaam oo propionyl-L-carnitine ah maalin kasta oo lagu daro irbado dawo la yiraahdo verapamil.
Cudurka loo yaqaan 'ulcerative colitis': 0.5-1 garaam oo ah propionyl-L-carnitine laba jeer maalintii.
Waxaad sidoo kale isku dari kartaa l -carnitine, iyo Cialis, laakiin qiyaasta saxda ah ka hel xirfad-yaqaan caafimaad si aad u hesho waayo-aragnimo wanaagsan.
Cudurada wadnaha iyo xanuunada xididada dhiiga: Khubarada caafimaadku waxay maareeyaan irbado loo yaqaan 'propionyl-L-carnitine irbado', oo loo yaqaan IV.
Glycine Propionyl-L-Carnitine Side Raadka & Amniga
Propionyl-L-carnitine waxay aamin u tahay dad badan markii afka laga qaato ama lagu mudo ciridka ee dhakhtar xirfad leh. Waxay sababi kartaa shuban, calool xanuun, calool xanuun, matag, calool xanuun, iyo caabuq feeraha. Intaa waxaa sii dheer, waxay sababi kartaa ur xun oo neefsashada, kaadida, ama dhididka.
Isticmaalayaasha uurka leh iyo kuwa naas-nuujinta: Wax yar ayaa laga ogyahay isticmaalka propionyl-L-carnitine ee loogu talagalay naasnuujinta ama hooyooyinka uurka leh. Ku sii wad taxaddar iskana ilaali isticmaalka.
"Thyroid aan firfircooneyn" (hypothyroidism): propionyl-L-carnitine ayaa laga yaabaa inay ka sii darto hypothyroidism ama daaweynta hoormoonka tayroodh ee aan waxtar lahayn. Kiimikada ku jirta daroogada, ie, L-carnitine, waxay faragelisaa hormoonka tayroodhka. Waxaa fiican inaad iska ilaaliso propionyl-L-carnitine haddii aad qabto hypothyroidism.
Suuxdimaha: Dhowr qof oo taariikh u leh suuxdin ayaa soo sheegay koror darnaanta iyo qallalka tirada kadib markay isticmaalaan L-carnitine. Waxaa jira suurta gal weyn in tani ay ku dhici karto propionyl-L-carnitine maaddaama ay leedahay kiimiko la mid ah.
Isdhaxgalka GPLC iyo daawo kale
Si aad u ahaato dhinaca nabdoon, la tasho dhakhtarkaaga ka hor intaadan bilaabin qaadashada GPLC. Haddii ay dhacdo inaad qaadato Acenocoumarol (Sintrom), waa inaad sidoo kale ku lug lahaataa takhtarkaaga maadaama laga yaabo inay leedahay is dhexgal khafiif ah maxaa yeelay waxay yareyn kartaa xinjirowga dhiigga halka GPLC ay kordhin karto saameynta Sintrom.
Warfarin (Coumadin) waa daawo kale oo aad isla qaadan karto iyadoo lagu kordhinayo glycine propionyl-l-carnitine supplement. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer hubi inaad ka heshid qiyaasta saxda ah daawadaada. Qiyaasta daawadu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran xaaladda daaweynta.
Halka laga iibsado dheeri ah ee Propionyl-L-Carnitine
Sida badeecad kasta oo kale oo caafimaad, waxaad ka iibsan kartaa glycine Propionyl-L-Carnitine kaabsabka aagyada kala duwan ee internetka ama xitaa sheybaarka caafimaadka jirka. Si kastaba ha noqotee, loolanka ayaa ku jira xulashada ganacsade saxda ah oo ku siin doona alaab tayo leh. Kuwa badan baa jira iibiyaasha budada glycine Propionyl-l-Carnitine, jidh ahaaneed iyo khadka tooska ahba. Si kastaba ha noqotee, taasi maahan inay kaa nixiso, waxaad u baahan tahay waa inaad waqtigaaga qaadatid oo aad cilmi baaris ku sameysaa kuwa iibiya budada glycine Propionyl-l-Carnitine.
Waxaad haysataa xorriyad inaad ku iibsato budada badan ee glycine Propionyl l-Carnitine ama kaliya kuugu filan isticmaalkaaga. Xusuusnow, inaad had iyo jeer ka hesho qiyaasta saxda ah ee xirfadlaha caafimaadka si aad ugu raaxaysato ugu badnaan faa'iidooyinka glycine propionyl-L-carnitine. Tixgeli inaad dhex marto propionyl-l-carnitine Redditreviews si aad u hesho aragti guud ee khibradaha isticmaale ee kala duwan. Waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa l carnitine iyo Cialis isla iibiyaha, iyo waxyaabo kale oo dheeri ah. Noocyada Propionyl-l-carnitine way ku kala duwan yihiin hal meel ilaa goob kale, laakiin wali waa isku dheeri. U xaqiiji dhakhtarkaaga kahor intaadan amarka bixin.
Stasi, MA, Scioli, MG, Arcuri, G., Mattera, GG, Lombardo, K., Marcellini, M.,… & Borsini, F. (2010). Propionyl-l-carnitine wuxuu hagaajiyaa soo kabashada socodka dhiigga ee postischemic iyo dib u soo celinta arteriogenesis wuxuuna yareeyaa endothelial NADPH-oxidase 4-dhexdhexaadinta wax soo saarka superoxide. Arteriosclerosis, thrombosis, iyo bayoolaji vascular, 30(3), 426-435.
Gianfrilli, D., Lauretta, R., Di Dato, C., Graziadio, C., Pozza, C., De Larichaudy, J.,… & Lenzi, A. (2012). Propionyl ‐ l ‐ carnitine, l ‐ arginine iyo niacin ee dawada galmada: habka nafaqada ee cillad kacsi. Andrologia, 44, 600-604.
Flayyih, NK (2015). Saamaynta L-carnitine ee lagu maareynayo jiirarka uurka leh ee waxqabadka taranka ee dusha haweenka. Joornaalka Wassit ee Sayniska & Daawada, 8(1), 97-104.
1.Waa maxay Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC)
2.Glycine Propionyl-L-Carnitine iyo L-Carnitine
3.Glycine Propionyl-L-Carnitine Raadka
4.Glycine Propionyl-L-Carnitine Cilmi baaris iyo Natiijo
5.Waa Maxay Cunnooyinka Ku Qanisan Glycine Propionyl-L-Carnitine?
6.Sidee loo qaadaa Glycine Propionyl-L-Carnitine
7.Glycine Propionyl-L-Carnitine Side Raadka & Amniga
8. Isdhexgalka GPLC ee dawooyinka kale
9.Xagee laga iibsadaa kaabista Propionyl-L-Carnitine